North Korae Awooda Nukliyeerkeenu Waxay Mareykanka Kuqasbi Doontaa Inuu Naga Iibsado: – Saraar Media
Home›All English News›America›North Korae Awooda Nukliyeerkeenu Waxay Mareykanka Kuqasbi Doontaa Inuu Naga Iibsado:
Safiirka Safaarada North Korea Kuleedahay Moscow Kim Yong-jae. Waxuu wadamada Eeshiya ku dhaliilan iney iska Dhago iyo indho marayaan ciidamada Mareykanka ee lagu soodaad gureynayo wadamadooda, xitaa hadii ay ujeedadu mid danaha mareykanka uadeegaysa. Sidaasna waxuu sheegay marey kulan labo sacadooda oo albaabadu u xudhan yihiin wada yeesheen Madax sarsare oo kakala socota labada wadan ee South Korean iyo North Korea, oo lagaga arinsanayey Nabad kadhex dhalata labadooda wadan iyo sidii dib loogu mideyn lahaa labada Korea.
00 Dowlada Pyongyang ee Waqooyiga Kuriya, ayaa qaadey tijaabadii ugu sareysey ee abid la tijaabiyo Gantaalaha xanbaara Bamka loo yaqaan hydrogen bomb, oo awood uleh inuu wixii nool ka sumeeyo neefsashada hawada, tasoo keenta in noolayaashu mido ilbidhiqsiyo kusiman ay naftooda ku waayaan. sidaasna waxaa sheegay Ri Yong-ho wasiirka arimaha dibada dalka Waqooyiga Kuriya, wasiirka ayaa ku ...
Sidoo kale Kim waxuu carabka ku dhuftay siday wadankiis uga go’antahay xoojinta iyo nabadeynta wadanka walaalahood ee South Korea, marka loo eego ayuu yidhi hadalada cadhada leh ee Donald Trump kula kacay hogaamiyaheena Kim Jong-un khudbadii uu kajeediyey shirkii dhoweyd ee qaramada midoobey, oo Trump ku tilmaamay in Kim Jong un uu yahay Nin Waalan.
Taasoo aanu uga tanaasulney ayuu yidhi safiirku qiimaha iyo qadarinta wadankeena walaalaha nahay ee South Korea. Waxayna Mid katahay siyaasada qobqonaanta iyo isku dirka Mareykanku ka dhex wado labada wadan. Dowlada South Korae waxay inbadan isku dayday iney wadahadal loowada dhanyahay loo qabto labada dhinac balse waxaa hor istaagay Dowlada Mareykanka oo sheegtey in Talaabo kasta oo ay kujirto danta Waqooyiga Kuriya ay tahay mid xadgudub ku ah cunaqabateynta saaran. Taasina waa mid meesha kasaareysa ayuu yidhi safiirku. Marinka labada wadan ay isku afgaran lahaayeen sidii loo gaadhi lahaa nabad.
58 Ayaa Toogasho Lagu Dilaey 500 Kalena ...
Daawo: Cali Xaraare oo Falanqaynaya Guruubada Loolanka Siyaasada ee Doorashooyinka Soomaaliya